Uvavanyo lwe-HiSET-I-High School Equivalence Exam
Kubafundi Abadala Ezisiseko
Yintoni ehlolwayo entsha ye-HiSET?
NgoJanuwari 1, ngo-2016, uvavanyo lweGED (Jikelele loPhuhliso lwezeMfundo), olwenziwe yiNkonzo ye-GED Testing, latshintshile ixesha elide, kwaye kunjalo neendlela ezifumanekayo kumazwe ase-US, ngasinye sichaza iimfuno zayo. Amazwe ngoku anokukhetha okuthathu:
Inkonzo yokuvavanya kwe-GED (iqabane elidlulileyo)
Uhlelo lwe-HiSET, oluphuhliswe yi-ETS (iNkonzo yoVavanyo lwezeMfundo)
Uvavanyo lokuVavanya ukuPhunyezwa kweSesekondari (i-TASC, eyenziwe nguMcGraw Hill)
Eli nqaku li malunga novavanyo olutsha lwe-HiSET olunikezwa ngo:
Ukuba urhulumente wakho awululwanga apha, unikeza enye yeemvavanyo ezifanayo zesikolo esiphakamileyo. Fumana ukuba ngubani kuloluhlu lwethu: Iiprogram zeGED / High School Equivalence Programme eUnited States
Yintoni ekhoyo kwi-HiSET Test?
Uvavanyo lwe-HiSET lunamalungu amahlanu, kwaye lithathwa kwikhompyutha:
UbuGcisa beeLwimi - UkuFunda (65 imizuzu)
Imibuzo engama-40 ekhethekileyo efuna ukuba ufunde nokutolika izibhalo ezibhalwe kwiintlobo ezahlukeneyo, kubandakanywa imemori, iincwadana, i-biographies, i-editorial, kunye nezibongo.
UbuGcisa beeLwimi - Ukubhala (Icandelo 1 limizuzu engama-75; Icandelo 2 limizuzu engama-45)
Icandelo 1 linemibuzo engama-50 enokuzikhethela ukuvavanya amandla akho okuhlela iileta, izincoko, amanqaku epapasho, kunye nezinye iitekisi zokubambisana, isakhiwo sesigwebo, ukusetyenziswa, kunye nemishini.
Icandelo 2 libandakanya ukubhala enye incoko. Uya kufakwa kwi-intuthuko, intlangano kunye nolwimi.
IMathematika (90 imizuzu)
Imibuzo engama-50 ekhethiweyo yokuvavanya izakhono zakho zokuqiqa kunye nokuqonda kwemisebenzi yamanani, ukulinganisa, ukuqikelela, ukuchazwa kwedatha kunye nokucinga okunengqiqo. Ungasebenzisa i-calculator.
Isayensi (80 imizuzu)
Imibuzo engama-50 ekhethekileyo efuna ukuba usebenzise ulwazi lwakho lwe-physics, i-chemistry, i-botany, i-zoology, impilo kunye neenkwenkwezi. Ukuchazwa kwamagrafu, amatafile kunye neetshathi zibandakanyeka.
Izifundo zeNtlalo (70 imizuzu)
Imibuzo engama-50 ekhethekileyo ngokuphathelele imbali, isayensi yezopolitiko, ingqondo, i-sociology, i-anthropology, i-geography kunye nezoqoqosho. Uya kufuneka uhlukanise inyaniso kwimbono, uhlalutye iindlela, kwaye ugwebe ukuthembeka kwemithombo.
Iindleko zokuvavanywa, ngoJanuwari 1, 2014, ziyi-$ 50 kunye neenxalenye nganye ezibiza i-$ 15 nganye. Ixabiso lama-50 le-50 libandakanya i-prep test test kunye neemvavanyo ezimbini zamahhala ezinyangeni ezili-12. Imirhumo inokuba yinto eyahlukileyo kwilizwe ngalinye.
Iwebhusayithi ye-HiSET inikeza ividiyo ye-free tutorial, incwadana yokufunda ngendlela ye-PDF, imibuzo yesampuli, kunye nokuhlola iimvavanyo. Unokuthenga izinto ezongezelelweyo zokupasa kwiwebhusayithi.
I-site ye-HiSET inikezela ngamanqaku afanelekileyo kunye nezicwangciso zokupasa uvavanyo, kuquka nendlela yokukwazi ukuba ulungele, njani ukulungiselela ixesha lakho, indlela yokuphendula imibuzo ekhethiweyo, kunye nendlela yokusombulula umbuzo we-essay ngokubhala inxalenye yovavanyo lobugcisa beelwimi.
Ezinye iilingo ezimbini
Ukuze ufumane ulwazi malunga nezinye iimvavanyo ezifanayo zesikolo esiphakamileyo, jonga:
Uvavanyo loVavanyo lweSigcawu seSondari (TASC) - kuza kungekudala!
13 Ukunyuka kwamashishini Ukucinga ukuba Ubuyela esikolweni
Uhambo lweHero - Intlanganiso kunye noMenzi
I-Au Clair de la Lune Iingoma kunye neNguqulelo
Amakha, amaLobsters kunye nezihlobo
Ukuchaza i-Angle ne-Bounce Angle kwi-Wedges
I-Stratigraphy: I-Geological Geological, i-Archaeological Layers
Ukusetyenziswa kweMisebenzi yokuQalisa uMenzi kwi-Binomial Distribution
Iingcaphulo zoLuthando noBomi
Indlela yokuhlamba i-Backstroke okanye i-Back Crawl
I-American Revolution: I-Battle of Fort Washington
Ukusetyenziswa kweFiber Fiber